Mid ka mid ah shaqaalaha laanta socdaalka oo cuntada ka cunay magangalyo doonka | Somaliska
Mid ka mid ah shaqaalaha Laanta Socdaalka ayaa lagu eedeeyay in uu cuntadii loogu tala galay dadka magangalyo doonka ah uu isagu cunay. Ninkaan oo ka shaqeeya kaampka Märsta ee waqooyiga Stockholm ayaa ka mid ah shaqaalaha hawshoodu tahay in ay quudiyaan dadka magangalyo doonka ah. Ninkaan ayaa hore digniin loo siisay ka markii la sheegay in uu cuntada loogu tala galay soo galootiga cunay asagoo mardhaweyd lagu qabtay asagoo digaag ay lahaayeen soo galootiga daliiqaya. Ninkaan ayaa diiday eedeynta loo soo jeediyay asagoo sheegay cuntada uu cunayay in uu kala yimid gurigiisa. Warbixinta laga diyaariyay ninka oo ay soo gudbisay xarunta Märsta ayaa lagu yiri in ay waji xumo tahay xarunta iyo guud ahaan laanta socdaalka in shaqaalaha ay cuntada loogu talay galay soo galootiga cunaan.
Mid ka mid ah shaqaalaha laanta socdaalka oo cuntada ka cunay magangalyo doonka
Mid ka mid ah shaqaalaha Laanta Socdaalka ayaa lagu eedeeyay in uu cuntadii loogu tala galay dadka magangalyo doonka ah uu isagu cunay. Ninkaan oo ka shaqeeya kaampka Märsta ee waqooyiga Stockholm ayaa ka mid ah shaqaalaha hawshoodu tahay in ay quudiyaan dadka magangalyo doonka ah.
Ninkaan ayaa hore digniin loo siisay ka markii la sheegay in uu cuntada loogu tala galay soo galootiga cunay asagoo mardhaweyd lagu qabtay asagoo digaag ay lahaayeen soo galootiga daliiqaya.
Ninkaan ayaa diiday eedeynta loo soo jeediyay asagoo sheegay cuntada uu cunayay in uu kala yimid gurigiisa. Warbixinta laga diyaariyay ninka oo ay soo gudbisay xarunta Märsta ayaa lagu yiri in ay waji xumo tahay xarunta iyo guud ahaan laanta socdaalka in shaqaalaha ay cuntada loogu talay galay soo galootiga cunaan.
ALLOOW YAA OGAADO WAA UUN SOMALI NINKAAS WIRR WAX KALE HA NAQDO